तपाईंको मेच बोल्ड साइडलाई बाहिर ल्याउनुहोस् केहि मेषले प्रेरित मेकअप लगहरूको साथ - मेक अप गर्नुहोस्
केश मेष-प्रेरित मेकअप लगहरूको साथ तपाईंको भित्री बोल्ड पक्ष बाहिर ल्याउनुहोस्
मेषको मौसममा तपाईंलाई स्वागत छ! तिनीहरूको आत्मविश्वास र साहसी गुणहरूको लागि परिचित, राशि साइन इन राशिका व्यक्तिहरू काँडादार व्यक्तित्व हुन्छ। पहिलो अनौंठो ट्रेंडहरू सिर्जना गर्न, एरियनहरू ट्र्यान्डसेटरहरू जन्मिन्छन् र यो तिनीहरूको सौन्दर्यको रूपमा देखिन्छ। तिनीहरूसँग आफ्नो भयंकर व्यक्तित्वको साथ एक भावुक पक्ष पनि हुन्छ जुन आफ्ना प्रियजनहरूको वरिपरि आउँछ। परिभाषित कन्टुरोल लुकको साथ बोल्ड रेड लिप उत्तम मेष शैली हो। एरियानहरू पनि प्रयोग गर्न र अद्वितीय र कहिल्यै नदेखी-पहिले-प्रवृत्तहरू सिर्जना गर्न मार्ग नेतृत्व गर्न मन पराउँछन्।
यो वसन्त seasonतु को शुरूआत गर्ने समय हो जुन केहि लाल रातो देखिन्छ। मेष मौसममा तपाईंलाई स्टाइलमा शासन गर्नको लागि मद्दतको लागि हाम्रो केही मनपर्ने हेराईहरू तल स्क्रोल गर्नुहोस्।
कसले भने कि हलोस केवल दूतहरुका लागि हो? धुम्रपान गर्ने रातो हेलो आँखा एकदम भरी देखिन्छ। र contrast्गको एक पप ल्याउनुहोस् केहि विरोधाभासी शीतल-टोन्ड पेस्टल ह्यूजको साथ वसन्त vibe लाई पूरक गर्नुहोस्!
आगो चिन्हले केहि ज्वलन्त ग्राफिक आँखाका लागि कल गर्दछ। Orangeतुको लागि ट्रेन्डी आँखो सिर्जना गर्न सुन्तला र रातो र shadको छहारीका साथ वरिपरि खेल्नुहोस्। पानी सक्रिय eyeliners छनौट गर्न को लागी को लागी कोशिश गर्न को लागी तिनीहरू ग्लाइड को लागी र ग्राफिक eyeliners लाई एक तीक्ष्ण फिनिश दिन सक्छ।
उज्यालो र बोल्ड रेडहरू
छवि: @ पेट्रिक्टा , @nikki_makeup , @nikki_makeup
मेष मौसममा रेडको बोल्ड शेड बिना ल्याउन असम्भव छ। रातो मेषको लागि प्रबल रंग हो, र एक उज्यालो, रातो ओठको साथ कहिल्यै गल्ती गर्न सक्दैन। यसले प्रभुत्व र शक्तिको प्रतीक पनि दिन्छ - आगो स everything्केतका लागि खडा हुने सबै। एक सूक्ष्म धुम्रपान आँखा श्रृंगार को लागी बाहिर सन्तुलन प्रयास गर्नुहोस् र आफ्नो ओठ कुरा गरौं।
नरम अझै भयंकर
छवि: @ पेट्रिक्टा
भावुक आत्मा भनेर पनि चिनिन्छ, एरियन्स - उनीहरूको दिन बन्द - एक सहज नग्न ओठ र धुवाँको आँखा झिक्न सक्दछ। नरम-अझैसम्म कडा देखिनु को लागी तपाइँको श्रृंगार मा न्यानो पिन्क र mauves को एक tinge को लागी।
यो पनि पढ्नुहोस्: मेकअप देखिन्छ कि मीन मौसममा चीख्छ
कपाल कपाल जरा लागि घरेलू उपचार
कसरी प्राकृतिक हिसाबले रोक्न
छालामा बेकिंग सोडा साइड इफेक्टहरू
कपाल झर्ने घटाउन सल्लाह